के तपाईलाई पिसाब पोल्ने समस्या छ ? यस्ता छन् कारण - Koshi Online
के तपाईलाई पिसाब पोल्ने समस्या छ ? यस्ता छन् कारण
डा. सुबोध रेग्मी, युरोलोजिस्ट, सिभिल अस्पताल
पिसाब गर्दा पोल्ने, पिसाब गाढा पहेँलो हुने, पिसाबमा रगत देखिने अथवा पिसाब फेर्न गाह्रो हुने समस्याबाट धेरै मानिस पीडित हुन्छन् । सामान्यतया एउटा स्वस्थ व्यक्तिले २४ घण्टामा डेढदेखि २ लिटरसम्म पिसाब फेर्नुपर्छ । त्यति मात्रामा पिसाब भएन भने पिसाबमा केही समस्या छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यस्ता समस्या एउटा बिनारोग र अर्को रोग लाग्दा देखिन्छ।
बिनारोग आउने समस्या
– शरीरमा पानीको मात्रा कम भएमा बिनारोग पनि पिसाब फेर्दा पोल्ने, थोरै पिसाब हुने र गाढा पहेँलो पिसाब आउने हुन्छ । गर्मी याममा जाडो महिनाभन्दा कम पिसाब आउँछ । गर्मीमा पसिनाका कारण शरीरमा पानीको मात्रा घट्ने हुदा पिसाबको मात्रा कम भएको हो । यसकारण गर्मी याममा आफूलाई सहज हुने गरी पर्याप्त मात्रामा पानी पिउँदा यस्ता समस्याबाट बच्न सकिन्छ । केहीमा पिसाब अडिने ठाउँको गडबडी (डिसफङ्सनल भोइडिङ) का कारण पनि पिसाबमा समस्या देखिन्छ । पिसाब फेर्ने समय नमिल्दा र पिसाब लागेको समयमा धेरै बेर रोकेर बस्दा यस्ता समस्या आउँछन् ।
रोगका कारण आउने समस्या
विभिन्न रोगका कारण पिसाबमा समस्या देखिन्छ । पर्याप्त मात्रामा पानी पिउँदा पनि पिसाबमा गडबडी देखियो भने शरीरमा केही समस्या छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । विविध रोगका कारण पिसाबमा गढबडी देखिन्छ।
प्रायःजसो पुरुषहरुमा प्रोस्ट्रेट ग्रन्थीमा इन्फेक्सन भएपछि पिसाबमा गडबडी हुने र पिसाब फेर्दा पोल्ने हुन्छ । पिसाब थैली र मुत्रनलीमा संक्रमण हुँदा पनि यस्तो समस्या भएको पाइन्छ । महिलाहरुमा भने मुत्रनलीको लम्बाइ पुरुषकोभन्दा सानो हुने हुँदा यौनांग र मलद्वारबाट पिसाब माथि सर्न सक्ने भएकाले संक्रमण हुने सम्भावना बढी हुन्छ । प्रोस्ट्रेट ग्रन्थी उमेर अनुसार बढ्दै जाने भए पनि सबै उमेर समूहकालाई ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुने सम्भावना रहन्छ ।
पिसाबथैलीमा हुने ट्युमरका कारण पनि छिन–छिनमा पिसाब लाग्ने, पोल्ने र पिसाब फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखिन्छन् । पिसाबमा रगत देखिया भने पिसाबथैलीमा ट्युमर हुन सक्छ भन्ने बुभ्mनुपर्छ । ट्युमरको कारण मात्र नभई स्टोनको कारणले पनि पिसाब फेर्दा रगत आउन सक्छ भने सोझै किड्नीबाट पनि रगत बगेको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा जतिसक्दो चाँडो चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ ।
यौन रोगका कारण पनि पिसाबमा गडबडी आउँछ । यस्तै, टिबी रोग भएका बिरामीलाई पनि पिसाब फेर्दा पोल्ने हुन्छ ।
४. इन्ट्रेस्टिसियल सिस्टाइटिस
पिसाबथैलीको भित्री पत्रमा खराबी आएमा पनि पिसाबमा समस्या देखिन्छ । मेडिकल भाषामा यसलाई इन्ट्रेस्टिसियल सिस्टाइटिस भनिन्छ । कुनै पनि चेकजाँचबाट केही पत्ता लागेन तर समस्या उस्तै रह्यो भने इन्ट्रेस्टिसियल सिस्टाइटिस भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
५. क्रोनिक प्रोस्टाटाइटिस
केही पुरुषहरुमा क्रोनिक प्रोस्टाटाइटिसका कारण पनि पिसाबमा समस्या देखिन्छ । प्रोस्ट्रेट ग्रन्थीमा लामो समयदेखिको संक्रमणलाई क्रोनिक प्रोस्टाटाइटिस भनिन्छ ।